Dibudhac kuyimid doorashadii madaxweynaha maamulka Galmudug. – Radio Daljir
Janaayo 29, 2017 3:10 b 0
Cadaado, Jan 29 2017-Xildhibaanada Maamulka Galmudug ayaa dhawaan shaaciyay in ay dooran doonaan Madaxweyne cusub uu maamulkaasi yeesho ,kadib markii ay xilka ka qaadeen Madaxweynihii hore ee Maamulkaasi Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Guddiga Qaban qaabada Doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa horey u shaaciyay in Doorashada Madaxweynaha Galmudug ay dhaceyso 8-ka bisha Febraayo , waxaana hada soo baxaya warar sheegaya in Doorashada waqtigaasi ay dib uga dhaceyso.
Xubno katirsan Wakiilada Beesha Caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan gaar ah la qaatay Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Baarlamaanka Maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed iyo Xildhibaano katirsan maamulkaasi.
Barlamaanka iyo beesha caalamka ayaa kawada hadlay xiisada Siyaasadeed ee ka jirta Deeganaada Galmudug, waxa ayna sheegeen Beesha Caalamka in ay sax ula muuqato xil ka qaadista ay Baarlamaanka ku sameeyeen Madaxweyne Guuleed.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa ka codsaday Baarlamaanka Maamulka Galmudug in dib loo dhigo Xiliga Doorashada Madaxweynaha Galmudug maadaama waqtiga doorashada Madaxweynaha Soomaaliya iyo tan Mudug ay hal waqti ku beegan yihiin.
AKHRISO-Xukumo lagu ridey dhallinyaro dhowaan gabar ku kufsaday degmada Gal-dogob.